Wed, Jul 8, 2020 at 4:45am
काठमाडौं, २ असोज केही दिन पहिले राजधानीमा अर्जुन कुमारले फिल्म युनिट सहित चपली हाइट–३​ को एक पोष्टर समेत सार्वजनिक गरेका थिए । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का बीचमा राखिएको र अन्य दुई कलाकार दयाबाँया राखेर डिजाइन गरिएको उक्त पोष्टरले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । कार्यक्रममा केहीले त पोष्टरको प्रशंसा समेत गरेका थिए । निर्माता अर्जुन कुमारले सार्वजनिक गरेको उक्त पोष्टर हलिउड फिल्म ‘इएल क्युरोप’सँग हुबहु मिल्न..
मुम्बई, २ असाेज । आइफा अवार्ड-२०१९ मा उत्कृष्ट अभिनेताको उपाधि फिल्म 'पद्ममावत' का लागि रणवीर सिंहले जितेका छन्। बुधबार मुम्बईमा सम्पन्न उक्त अवार्डमा आलिया भट्टले 'राजी'बाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड पाएकी छन्। फिल्मतर्फ पनि 'राजी' नै उत्कृष्ट भएको छ। अन्धाधुनुका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड श्रीराम राघवनले पाएका छन्। त्यस्तै चरित्र अभिनेता 'सपोर्टिङ एक्टर' को अवार्ड 'सञ्जु' बाट विक्की कौशलले र अभिनेत्रीमा 'पद्मावत'का लागि अदिती राव हैदरले..
काठमाडौँ, १ असोज । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सारङ्गीको आर्केष्टा ‘सारङ्गीमा देश’ प्रस्तुत गर्ने भएको छ । कलाकार समूहले नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मौलिक नेपाली लोकधुनहरूको विशेष प्रस्तुति गर्नेछ । मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निमित्त नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को सन्दर्भसमेत जोडेर आयोजना गरिने उक्त फरक शैलीको सांस्कृतिक÷साङ्गीतिक कार्यक्रम यही असोज २ गते साँझ..
काठमाडौँ, ३१ भदौ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा चार÷चार वर्षमा प्रदान गरिँदै आएको गहन महत्वको पुरस्कार ‘पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार’ २०७६÷७८ का लागि वाङ्गमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कारको राशि रु चार लाख रहेको प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा जगतप्रसाद उपाध्याले जानकारी दिनुभयो । आज सम्पन्न ३४औँ प्राज्ञसभाले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा प्रदान गरिने नेपाल प्रज्ञा सामाजिकशास्त्र, संस्कृति तथा दर्शनशास्त्र..
काठमाडौँ, ३१ भदौ । गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ...” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत जति चर्चामा आउन सकेको छैन । हाल..
कपिल शर्मा शोमा फर्किदै सुनिल ग्रोवर !
मुम्बई, ३० भदौ कमेडियन कपिल शर्मा र सुनील ग्रोवरले पछिल्लो केही बर्ष एकसाथ कमेडी मार्फत दर्शकको मनमा राज गरे । यी दुबै कमेडियनका अलग–अलग अन्दाज दर्शकले रुचाए । दुबैले एकसाथ मिलेर दर्शकलाई निकै मनोरञ्जन समेत दिलाए । कपित त अहिले पनि ‘द कपिल शर्मा शो’ मार्फत दर्शक हँसाइरहेका छन् । तर शोमा सुनील भने छनन् । तर दर्शकले शोको गोल्डेन समय भने..
मिस एशिया प्यासिफिक इन्टरनेसनलकाे उपाधी प्रतिष्ठालाई
काठमाडौं, ३० भदौ । मिस एशिया प्यासिफिक इन्टरनेसनल नेपाल २०१९ को उपाधि प्रतिष्ठा साखले जितेकी छिन् ।बौद्धस्थित हायात रिजेन्सी होटलमा संचालन भएको मिस एशिया प्यासिफिक इन्टरनेसनल नेपाल २०१९ को फाइनल प्रतिस्पर्धामा प्रतिष्ठा साखःले मुख्य उपाधिको ताज आफ्नो शीरमा सजाउन सफल भएकी हुन् । प्रतियोगितामा आश्रा श्रेष्ठले ट्यालेन्ट अवार्ड सहित मिस टुरिजम क्वीन इन्टरनेसनल नेपाल २०१९ को तजा पहिरिन् । यसैगरी प्रतियोगितामा अनिला लामाले मिस ग्लोबल..
मिस ग्राण्ड नेपालकाे ताज दमककी प्रीति पौडेललाई
काठमाडाैं, २९ भदाै । दमककी प्रीति पौडेलले मिस ग्राण्ड नेपाल–२०१९ को उपाधि जित्न सफल भएकी छिन्। मिस पूर्वाञ्चल मोडल आइकनको उपाधि जितेर मिस ग्रान्ड नेपालमा सहभागी बनेकी प्रीतिलाई मिस टुरिजम नेपाल २०१८ की विजेता आस्था साखःले ताज पहिर्याइदिएकी थिइन्। मिस ट्यालेन्ट र मिस फोटोजेनिकको अवार्ड पनि हात पारेकी उनले यही अक्टोबरमा भेनेजुएलामा हुने मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल–२०१९ मा सहभागिता जनाउने छिन्। ..
सोसल मिडियामा लोकप्रिय हुँदै उर्वशी रौटेला, चलचित्र सफल होला त ?
शनिबार, भाद्र २८, २०७६ साल
मुम्बई, २८ भदौ ग्ल्यामरस अभिनेत्री उर्वशी रौटेला सोसल मिडियामा लोकप्रियताको घोडामा सवार छिन्। इन्स्टाग्राममा उनलाई १९ मिलियनले पछ्याएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि उर्वशीलाई लगातार ‘भर्चुअल फेमिली’को प्रेम प्राप्त छ। यो खास अवसरमा उर्वशीले आफ्ना विशेष र डाई हार्ट फ्यानसँग आफ्नो भिडियो सेयर गरेकी छन्। दिल्लीमा उर्वशी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनले आफ्नी फ्यान अलकासँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। उर्वशीको..
भदौ अन्तिमबाट शुरू हुँदै नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन
काठमाडौं, २७ भदाै । यही भदौको अन्तिमबाट नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन शुरु हुने भएको छ । भदौ ३१ गतेबाट सुरु हुने अडिसन कात्तिकको पहिलो हप्तासम्म चल्ने छ । पहिलो अडिसन भदौ ३१ गते पोखरामा हुनेछ भने असोज ३ गते बुटवलमा हुनेछ । असोज ६ गते नेपालगञ्जमा अडिसन हुनेछ भने वीरगञ्जमा असोग १० गते हुने नेपाल आइडलले जनाएको छ। विर्तामोडमा असोज १४ गते..
मिस फारवेष्टकाे दोस्रो संस्करणका लागि आवेदन फारम खुल्याे
काठमाडाैं, २६ भदाै । रोयल कोलावोरेटिभ्स प्रालिको आयोजनामा मिस फारवेष्ट नेपाल २०१९ हुने भएकाे छ । मिस फारवेष्ट नेपाल २०१९ को दोस्रो संस्करणको लागि आवेदन फारम सुरु भएको हाे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत दोस्रो संस्करणबारे जानकारी गराइएको छ । मिस फारवेष्ट नेपाल सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित सौन्दर्य एवम् कला प्रतियोगीता भएको आयोजकको दाबी छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रवद्र्धक रहेको..
जिग्री र पाँडेको नयाँ सिरियल ‘सक्किगोनि’को प्रोमो सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ, २६ भदौ । मिडिया हबसँगको विवादपछि 'भद्रगोल'बाट छुट्टिएका कलाकारहरूले नयाँ टेलिसिरियल ल्याउने भएका छन् । भद्रगोलबाट बाहिरिएका जिग्री र पाँडे टिमको नयाँ सिरियल सक्किगोनि’को प्रोमो सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रोमोमा पाँडे ,जयन्ते र धतुरेको रमाइलो लडाई देखाइएको छ । अन्तमा प्रहरी आएपनि ३ जना भागेका छन् । भद्रगोलबाट बाहिरिएका २१ जनाको टिमले नयाँ सिरियलको नाम जुराउदै प्रोमो समेत सार्वजनिक गरेका हुन् ।..
काठमाडौं, २५ भदौ बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको फिल्म 'द स्काई इज पिंक' को ट्रेलर हालसालै रिलीज भएको छ। फिल्ममा प्रियंकासँग फरहान अख्तर र जायरा वसीम पनि देखिएका छन् । यस फिल्मको ट्रेलरलाई दर्शकले धेरै मन पराएका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रियंकाले निक उनलाई देखेर रोइरहेको पनि बताइन्। टोरोन्टो अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलको अवसरमा, प्रियंकाले पीपुल्स डटकमलाई बताइन् कि उनको फिल्म द स्काई..
बिपी साहित्य सम्मान ‘बैरागी काइला’ लाई ...
काठमाडौँ, २४ भदौ वरिष्ठ साहित्यकार तिलविक्रम नेम्बाङ ‘बैरागी काइँला’लाई यस वर्षको ‘बिपी साहित्य सम्मान पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । जननायक बिपी कोइराला स्मृति ट्रष्टले आज यहाँ एक कार्यक्रमको आयोजनामा रु एक लाख एक हजार राशिसहितको उक्त सम्मान उहाँलाई प्रदान गरेको हो । यसैगरी रु ५१ हजार राशिको ‘बिपी सेनानी सम्मान पुरस्कार’ प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन एवं सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु हुने सप्तरीका मधुकान्त..
बलिउड अभिनेत्री रविना हजुरआमा बन्दै
मुम्बई, २३ भदौ : बलिउड अभिनेत्री रविना टन्डन छिट्टै हजुरआमा बन्दैछिन् । रविनाले हालै आफ्नी छोरी छायाको ‘बेबी सोअर पार्टी’ आयोजित गरेकी छन् । उक्त पार्टीमा उनका नजिकका साथी सहभागी थिए । रविनाकी छोरी छायाको बेबी सोअर पार्टीको तस्बिर सोसल मिडियामा तीव्र रूपमा भाइरल भएको छ । छायाको गोद भराइमा पुगेकी रविनाकी खास मित्र पूजा मखिजाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा यो तस्बिर सेयर गरेकी..
भद्रगोलबाट बाहिरिएका जिग्री-पाँडेको नयाँ टेलिसिरियल आउँदै
काठमाडौं, २२ भदौ मिडिया हबसँगको विवादपछि 'भद्रगोल'बाट छुट्टिएका कलाकारहरूले नयाँ टेलिसिरियल ल्याउने भएका छन् । अर्जुन घिमिरे 'पाँडे', कुमार कट्टेल 'जिग्री', सागर लम्साल 'बले', हरि निरौला 'कक्रोज', मधुसुदन पाठक 'सीते बा'लगायतका २१ जना कलकारहरू अब पुन: टेलिभिजनको पर्दामा देखिने भएका छन् । आइतवार अर्जुन घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक स्टाटस राख्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले लेखेका छन्, 'हजुरहरूले हामीप्रति देखाउनुभएको माया, सद्भाव..
लगातार हिट फिल्म दिने साउथका यी सुपरस्टार, कति लिन्छन् पारिश्रमिक ?
काठमाडौं, २१ भदौ साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा शायदै कोही यस्तो कलाकार होला जो चर्चा र कमाईको मामलामा पछि छ । यो इन्डस्ट्रीमा एक से एक सुपरस्टार छन् । जसका फ्यान फलोइङ बलिउड स्टार भन्दा कम छैन । यी नै स्टारको सूचीमा छन् अल्लु अर्जुन । अल्लु अर्जुन तेलुगु फिल्मका सुपरस्टार हुन् । अल्लु अर्जुनले आफ्नो अभिनय यात्रा बाल्यकाल देखि नै सुरु गरेका..
स्कार्लेट जोहान्सन वर्षकै सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्री
एजेन्सी। अमेरिकी अभिनेत्री स्कार्लेट जोहान्सन यस वर्षकै सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्री बनेकी छन्। उनले सन् २०१९ मा पाँच करोड ६० लाख डलर कमाएकी हुन्। अमेरिकी व्यावसायीक पत्रिका फोब्सले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार स्कार्लेट जोहान्सन यस वर्षकै सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्री बनेकी हुन्। पत्रिकाका अनुसार, उनले सन् २०१८ को तुलनामा यस वर्ष एक करोड ५५ लाख डलर धेरै कमाएकी छिन्। सर्वाधिक कमाउने सूचीको दोस्रो स्थानमा भने सोफिया..
रणवीर र आलियाको गोप्य तस्बिर सार्वजनिक
काठमाडौँ, २० भदौ रणवीर कपुर र आलिया भट्ट बलिउडका हट केक मानिन्छन्। यो जोडिले जबदेखि फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ को सुटिङ सुरु गर्यो तबदेखि उनीहरु धेरै निकट भएको खबर मिडियामा आउन थाल्यो। यो कुरा तब सही सावित भयो जब आलियाले करण जोहरको च्याट शोमा आफ्नो सम्बन्धबारे बोलिन्। हालै यो जाडीको बिहेको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। त्यो सत्य त होइन तर, उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा..
अर्पिताको घरमा सलमान र कैटरिना एकसाथ देखिएपछि ...
एजेन्सी, १८ भदौ गणेश चतुदर्शीको अवसरलाई बलिउडकर्मीहरू विशेष महत्व दिन्छन्। हरेक कलाकारले आफ्ना घरमा उत्सव मनाँउछन्। हरेक कलाकारले आफ्ना घरमा गणपति बाबाको मूर्ति निर्माण गर्छन्। यस्तै बलिउडका दबङबोय सलमान खानले आफ्नी बहिनी अर्पिता खानको घरमा गणपति बाबाका पूजा गरेका छन्। खान परिवार सरिक भएको पूजामा केटरिना पनि सामेल भएकी थिइन्। अर्पिताले केटरिना कैफलाई विशेष रूपमा निमन्त्रणा गरेको बताइएको छ। कैफले पनि पूजा गरेको..
डेब्यूका लागि तयार हुदै बरुण धवनकी १९ वर्षे भतिजी
मुम्बइ, १८ भदौ । बरुण धवनजस्तै उनकी भतिजी अंजिनी धवन पनि स्टाइलमा निकै अगाडि छिन् । १९ वर्षकी अंजिनीका करिब १ लाख फलोअर छन् । अंजिनी अहिले पढ्दैछिन् तर उनको लक्ष्य भनेको बलिउडबाटै हिरोइनको रुपमा डेब्यू गर्ने हो । अंजिनीले यसको लागि प्रशिक्षण सुरु गरिसकेकी छिन् । उनले अभिनय, नृत्य र ग्रुमिङ कक्षा लिइरहेकी छिन् । यसमा बरुण पनि अंजिनीलाई सहयोग गरिरहेका..
तीजमा नायिक प्रतिक्षा खड्काको पोज (फोटोफिचर)
काठमाडौँ, १६ भदौ । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका (तीज) पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथसहित देशभरका शिव मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको बिहानैदेखि लाम लागेको छ । पशुपतिनाथ प्रवेश गर्न व्यवस्था गरिएका चार वटै लाम मूल सडकसम्म आइपुगेको छ । सबै लाममा महिला भक्तजन मात्र छन् । दर्शनार्थीले छिटोभन्दा छिटो मन्दिरमा दर्शन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका..
ऋणमा चुलुम्म डुबेका थिए माइकल ज्याक्सन
बिहिवार, भाद्र १२, २०७६ साल
काठमाडौं, १२ भदौ किंग अफ पप को रूपमा विश्वचर्चित बनेका माइकल ज्याक्सनको जन्म २९ अगस्ट १९५८ मा भएको हो । जुन २००९ मा माइकलले यस संसारबट बिदा लिए । माइकल ज्याक्सन एक मात्र यस्ता गायक, गीतकार र पप डान्सर थिए जसको नाम रक एन्ड रोल हल अफ फेममा शामिल गरिएको थियो । माइकल ज्याक्सनको नाममक १३ ग्रामी पुरस्कार, ग्र्यामी लीजेन्ड अवार्ड्स, ग्र्यामी लाइफटाइम अचीवमेन्ट..
कश्मीरमा पो भेटिए अक्षय कुमारका ‘जुम्ल्याहा भाइ’ !
काठमाडौँ, १२ भदौ । कश्मीरका एक किसान अचानक चर्चामा आएका छन् । बुजुर्ग माजिद मीर नाम गरेका एक किसान सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेका छन् । यसको कारण, उनको अनुहार र हाँसो बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारसँग मिल्यो । उनको तस्बिर हेर्दा धेरैलाई लाग्छ कि, उनी वास्तविक अक्षय कुमार नै हुन् । अक्षय कुमारको जुम्ल्याहा जस्तै देखिने मीरको सोही तस्बिर अहिले भाइरल बनेको हो । तस्बिरको..
महिलाहरु माइत जाने, दरखाने र महादेवको व्रत बस्ने तयारीमा
भद्रपुर, १० भदौ । अबका केही दिनमा आउने हिन्दू नारीको महान् चाड तीजको चहलपहल शुरु भइसकेको छ । महिलाहरु माइत जाने, दरखाने र महादेवको व्रत बस्ने तयारीमा छन् भने बजारमा तीजको किनमेल उत्कर्षमा छ । घरघरमा तीजको तयारी चले पनि सामूहिकरूपमा तीजको उत्सव मनाउने क्रम भने बाक्लिन थालिसकेको छ । सङ्घसंस्थाले तीज लक्षित नाचगान, भेटघाट र प्रतियोगिता धमाधम आयोजना गरिरहेका छन्..
रविलाई भेटेर निस्किएपछि दीपक र दिपाश्रीको प्रतिक्रिया : ‘रविजी नेता भएर निस्कँदै हुनुहुन्छ’
आईतवार, भाद्र ८, २०७६ साल
चितवन, ८ भदौ आइतबार बिहान रवि लामिछाने र कँडेललाई भेटेर बाहिरिएपछि कलाकारहरू दिपाश्री निराैला, दीपकराज गिरी र केदार घिमिरे (माग्ने बुढाले) अब रवि पत्रकार भन्दा पनि नेता भएर निस्किने बताएका छन् । रविसँग भेट गरेर बाहिर निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कलाकार दिपाश्रीले भनिन्, ‘सबै भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ रवि दाई जुन कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ त्यसले पनि उहाँ निर्दाेष भएकाे बताउछ, अघि मैले जाने..
काठमाडौँ, ७ भदौ काठमाडौँको नक्सालमा आजदेखि चार देशका कलाकारको सहभागितामा ‘अन्तरराष्ट्रिय कला प्रदर्शनी’ शुरु भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जलरङ समाज (आइडब्लुएस) नेपालको आयोजना तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नाफा) को सहकार्यमा शुरु भएको प्रदर्शनी भदौ १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । काठमाडौँथित प्रतिष्ठानको कार्यालय नक्सालमा शुरु भएको कला प्रदर्शनीमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश र चीनका चर्चित कलाकारको चित्र समावेश गरिएको आइडब्लुएस नेपालका अध्यक्ष एनवी गुरुङले..
शालिकराम हत्या प्रकरण : रविकाे रिहाइका लागि कलाकार भए एकजुट
काठमाडौं, ७ भदाै । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरूले टेलिभिजन पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका न्युज २४ का कार्यक्रम प्रस्ताेता रवि लामिछानेकाे रिहाइकाे माग गरेका छन्। विभिन्न कलाकारहरुले शालिकराम पुडासैनी आत्महत्याकाे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै रविकाे रिहाइकाे मग गरेका हुन् । रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलाकार दीपकराज गिरी, नायक निखिल उप्रेती, रमेश उप्रेती, निर्मल शर्माले घटनाबारेको यथार्थ सार्वजनिक गर्न माग..
बलिउड हिरोहरूमा सलमान नै नम्बर १, यस्तो छ अन्यको स्थान
काठमाडौँ, ६ भदौ भारतको प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क आजतकले कर्भी-इन्साइट नामक संस्थासँग मिलेर गरेको सर्वेक्षण ‘देशका मिजाज’ अन्तर्गत बलिउड अभिनेताहरूका बारेमा गरिएको सर्भेअनुसार सलमान खान पहिलो स्थानमा छन्। यो वर्ष औसत दरिएको उनको चलचित्र भारत मात्र सार्वजनिक भए पनि भारतीय जनताले अब्बल नायकहरूको सूचीका लागि सलमान खानलाई सर्वाधिक मत दिएका थिए। कुल ८ प्रतिशत मतका सलमान अब्बल दरिएका हुन्। यो खबर आजको साप्ताहिकमा छापिएको..
बिहेपछि कता हराइन् नायिका दीपिका प्रसाईं ?
काठमाडौँ, ६ भदौ फिल्म ‘ऐश्वर्या’ बाट चलचित्र जगतमा डेब्यु गरेकी नायिका दीपिका प्रसाईं अहिले हराएकी छिन् ।नायिका प्रसाईं निर्देशक दिवाकर भट्टराईसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि हराएकी हुन् । बिहेपछि उनी खासै चर्चामा छैनिन् । उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘ऐश्वर्या’ युट्युबमा रिलिज गरिएको छ । फिल्म हेरेर दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै उनको अभिनय रहेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ गत वर्षको दशैँमा रिलिज भएको..
Results 914: You are at page7of 31